android 7.1 Geely GX7 कार अडियो प्रणाली China Manufacturer
विवरण:Android .1.१ Geely GX7,GX7 कार अडियो प्रणाली,एन्ड्रोइड गिली कार अडियो प्रणाली
Home > उत्पादनहरू > चिनियाँ श्रृंखला एन्ड्रोइड कार DVD > android 7.1 Geely GX7 कार अडियो प्रणाली
android 7.1 Geely GX7 कार अडियो प्रणाली
GPS नक्शा कसरी अपडेट गर्ने?
सबै भन्दा पहिले तपाईले नक्शा अपडेट डाउनलोड गर्नुपर्नेछ हाम्रो वेबसाइट वा कहिँ पनि एन्ड्रोइड .1.१ गीली जीएक्स car कार अडियो प्रणाली रेडियोको लागि। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई जीपीएस एसडी कार्डमा प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ र सेटि through मार्फत नेभिगेसन प्रोग्राममा नेभिगेसन मार्ग सेट गर्नुहोस्।
के नेभिगेसन प्रयोग गर्दा संगीत वा रेडियो सुन्न सम्भव छ?!
हो, नेभिगेसन प्रणाली प्रयोग गर्दा रेडियो वा संगीत सुन्न यो सम्भव छ। क्लेटन उपकरणहरूले एक अद्वितीय प्रविधि प्रयोग गरीरहेको छ कि संगीत सुन्न लगाउँदछ जब तपाईं एन्ड्रोइड .1.१ गेली जीएक्स car कार अडियो प्रणालीहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
के यी एकाईहरूले स्टीयरिंग व्हील कन्ट्रोल समर्थन गर्दछ ?!
हो अवश्य। प्रत्येक फरक कार मोडेल को लागी, त्यहाँ बिभिन्न CAN-Bus (निर्मित वा छुट्टै युनिट) युनिटको साथ आउँदछ एन्ड्रोइड .1.१ Geely GX7 कार अडियो प्रणालीहरु गाडी एम्पलीफायर र स्टीयरिंग व्हील कन्ट्रोल गर्न।
के हामी डीवीडी युनिटहरू हाम्रो स्वयं स्थापना गर्न सक्दछौं?
यो रुचाईएको छ कि स्थापना एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा गरिनु पर्छ। हामी उपकरणको स्थापना गर्दा कारको ड्यासबोर्डमा हुने क्षतिको लागि जिम्मेवार छैनौं। त्यसोभए यो उत्तम छ कि एक पेशेवर व्यक्तिले android .1.१ Geely GX7 कार अडियो प्रणालीमा एकाई स्थापना गर्दछ।
Geely EC8 android 7.1 नेभिगेसन प्रणाली अब सम्पर्क गर्नुहोस्
Android .1.१ Geely GX7 GX7 कार अडियो प्रणाली एन्ड्रोइड गिली कार अडियो प्रणाली Android .1.१ E46 Android .1.१ Lifan X60 Android .1.१ BMW E39 Android .0.० GPS Android .0.०